Abasebenzisi Bokusetshenziswa Kwasekhaya Nefektri | Abenzi Bamadivayisi E-China Home
Ukunakekelwa kwesikhumba somuntu siqu 64pins titanium hydra roller
I-Titanium hydra roller iyithuluzi lobuhle elilula, ungayisebenzisa ukwenza ngcono isimo sesikhumba, ukuphakamisa isikhumba, ukususa induna, ubuso obumhlophe, ukususa umbimbi nokususa i-chloasma. Kunezinto ezimbili ongakhetha kuzo, ama-64pins nama-20pins. okubalulekile yi-titanium, ukuphepha nokuhlanzeka okungaphezulu! udinga kuphela ukuthulula noma yikuphi okushiwo ku-ampoule, Roll esikhunjeni sakho ukuze uthele uketshezi esikhunjeni.
ukunakekelwa kwesikhumba ebusweni nasentanyeni
Le modeli yokunakekelwa kwesikhumba yokuphakanyiswa kobuso nentamo iyathengisa ngokushisayo, inomsebenzi wokuthambisa nokushisa okungaguquki, izindlela ezintathu, ezisebenza kahle ebusweni be-v, ukuphakamisa intamo.
umshini we-blackhead obonakalayo wokuxhuma okususa ifoni
Le modeli ye-blackhead vacuum remover iyathengisa kakhulu, inamandla wokuhlanza i-pore, futhi iyasebenza kunoma yiluphi uhlobo lwesikhumba, kulula ukuyihlanza, sisekela insizakalo ye-oem.
cleaner mesotherapy gun for ukunakekelwa kwesikhumba
Lesi sibhamu semodeli ye-mesotherapy noma i-meso isisindo esincane futhi siyasebenza ekwelapheni ukunakekelwa kwesikhumba, okufana nokwenziwa mhlophe kwesikhumba, ukulwa nokuguga, umswakama wesikhumba, ukususwa kwe-pigment, nge-5 pin noma i-9pin inaliti yegobolondo, sisekela nensizakalo ye-oem.
Umshini wokususa umbimbi we-Microneedling RF
Umshini we-Microneedling rf ungumshini we-microneedle omningi, isibambo se-microneedle ukususa ukususwa kwezinduna, ukuhlanganiswa kwesikhumba, iza ne-RF laser, ingeyokuphakamisa isikhumba nokususa imibimbi, umphumela ungcono kune-singlefunction.we sithole izimpendulo eziningi ezinhle.
I-lens ye-UV Umshini wokuhlaziya isikhumba
Idivayisi yokuhlaziya isikhumba i-EH9100 iyimodeli ephathekayo, kulula ukuxhumanisa ikhompyutha yakho, ungathola ukuhlaziywa ngesimo sakho sesikhumba, kubalulekile endimeni yobuhle be-slaon, iza nelensi ye-UV, hlaziya ngokunembile imininingwane ethile isimoion.Wena inganikeza iklayenti lakho uhlelo olunembile lokwelashwa.
Digital ishiya tattoo ipeni bakha umshini V8
Umshini we-Make up V8 ungumshini we-multifunctuon, unezimbambo ezimbili, u-A no-B, ipeni yisibambo sokwakhiwa unomphela, i-tattoo izinhlobo ezi-4 zezingxenye ezahlukahlukene, ishiya, i-eyeline, izindebe kanye ne-areola. enye ipeni uhlelo lwe-microneedle therapy, ukuphakamisa isikhumba, ukususa imibimbi, ukwenza isikhumba mhlophe njll. Okubalulekile, isibambo se-A ne-B singasebenza ngasikhathi sinye, kulula kakhulu, okwamanje, ungalungisa amazinga wejubane we-10, ngokuya ngesidingo sakho.
1 inaliti mesotherapy gun yokunakekelwa kwesikhumba
Le model mesotherapy gun injector iyathengisa kahle, ayibuhlungu, asikho isidingo sokhilimu ontobekile, osebenza ngokushesha ngokususwa kwesibazi, ukuvuselelwa kwesikhumba, ukususwa kophawu lokulula njll.
Umshini Omusha We-Ultrasonic Skin Scrubber Wokuhlanza Ubuso I-Blackhead Remover Pore Cleaner EMS I-Massager yobuso obuguga
Isikhuhli sesikhumba sisetshenziselwa ukususa amakhanda amnyama, isikhumba esihlanzekile, ukunciphisa imibimbi, isikhumba esimhlophe, isingeniso se-essence njll.
Umshini We-Ultrasonic Skin Scrubber Wokuhlanza Ubuso
isikhumba sokuhlanza ubuso bokuhlanza isikhumba Isikhumba sokukhipha i-Blackhead Ukususa iPore Cleaner